I-AutoSEO vs. FullSEO - Yikuphi Inkonzo YeSemalt SEO Ekulungele Kakhulu
Ngakho-ke, ekugcineni usuthathe isinqumo esihlakaniphile sokuhlola nokusebenzisa izinsizakalo ze-SEO eziholela embonini ze-SEO?
Ngenxa yesinqumo sakho, maduze nje uzojoyina ichibi elikhula njalo lamakhasimende ajabule futhi anelisekile asizuze emisebenzini yethu yokumaketha edijithali. Kepha ngaleso sinqumo kuza umthwalo omkhulu wokukhetha inkonzo efanele. Eyilungele wena futhi ehambisana nezidingo zakho ezithile nezinhloso zebhizinisi.
Uma ufuna ukuthuthukisa ukusebenza kwe-SEO kuwebhusayithi yakho, uSemalt unikezela ngamaphakeji amabili we-Flagship: I-AutoSEO ne-FullSEO.
Ngenkathi kungenzeka ukuthi usunokuqonda okulungile kokuthi konke kufakwe kulawa mapakheji amabili, kusengaba khona ithuba lokungabaza nemibuzo. Uma usaqala emkhakheni we-SEO, incazelo ephelele idingeka kakhulu.
Ngakho-ke, namuhla sithatha isikhathi ukuqhathanisa amaphakheji ethu amabili athengisa kakhulu e-SEO. Ngemuva kokudlula kulo mbiko wokuqhathanisa okusheshayo, uzokwazi ukukhetha iphakheji elilungele ibhizinisi lakho.
I-AutoSEO ne-FullSEO - Izinsizakalo ze-SEO zikaSemalt
Ake siqale ngokudlula kokuqukethwe emaphaketheni. Ngenkathi bobabili bebhekiswe kumabhizinisi, kunokuhlukahluka ngobubanzi bephakeji ngalinye. Lesi sigaba sizokunika eminye imininingwane mayelana nomehluko.
I-AutoSEO ngoSemalt iyiphakethe 'lendlu ephelele' elihlanganisa imisebenzi eyisisekelo futhi ephakathi nendawo yokwenza injini yokucinga (i-SEO) yebhizinisi lakho online. Iqhuba umkhankaso we-SEO kuwebhusayithi yakho futhi wenza imisebenzi ethile esekhasini nekhasi elikusebenzayo ukukhulisa amazinga akho.
Ingabe unayo iwebhusayithi engaveli kusesho lwe-Google? I-AutoSEO ingakukhombisa indlela njengoba isenza eminye imisebenzi ebaluleke kakhulu yokwenza umsebenzi. Ezinye zazo zibhalwe ngezansi:
Ukucwaninga kwegama elingukhiye - Ukuhlolwa kwebhizinisi lakho, imboni yakho, kanye newebhusayithi yakho ukukhiqiza uhlu lwamagama asemqoka asemqoka, okusho imibuzo amakhasimende akho angahle ayifune kunjini yokusesha efana neGoogle noma i-Bing. Lesi ngesinye sezakhi ezibaluleke kakhulu ze-SEO
I-On-Page Optimization - Ukufakwa kwamagama angukhiye afanele ngaphakathi kokuqukethwe kwekhasi ngalinye lewebhusayithi yakho kanye nokwenza kahle ezinye izinto ezisekhasini ezinjengezihloko, incazelo ye-meta, kanye nezimpawu zesithombe
Isixhumanisi Sokwakha - Okwaziwa nangokuthi ukwenziwa kwe-off-ikhasi, kufaka phakathi ukukhiqiza nokusabalalisa okuqukethwe okufanele kwamanye amawebhusayithi nokuthola izixhumanisi emuva kusizinda sakho. Lokhu kuthuthukisa inani le-SEO (igunya lesizinda, ikakhulukazi) lewebhusayithi yakho ngokuqondisa ijusi le-SEO kusuka kulawa masayithi kuya kusizinda sakho
I-Web Analytics - Ukubuyekezwa kwansuku zonke, kwamasonto onke, njalo ngenyanga, njalo ngekota kokuhlaziywa kwewebhusayithi ukuqonda amamethrikhi ahlukahlukene afana nethrafikhi, ukuguqulwa kanye nokubandakanya okuningana kusuka kubavakashi bakho
I-AutoSEO izenzakalela iningi lale misebenzi futhi ikunikeze ngomkhankaso osebenzayo we-SEO ohlose ukukhulisa ukuma kwakho okujwayelekile kuwebhu.
Umdwebo 1 - Ukuhlola idatha ye-analytics iyingxenye ebalulekile ye-SEO (AutoSEO iyayinikeza)
Isici esihlukanisa i-AutoSEO kusuka ku-FullSEO ukuthi okwedlule kunika imiphumela esheshayo. Uma unebhizinisi le-niche futhi uqiniseka ngomncintiswano ophansi ku-inthanethi, i-AutoSEO ingakutholela imiphumela emavikini ambalwa. Ngomqondo ojwayelekile, i-SEO ngokuvamile ithatha izinyanga ngomthelela omuhle. Kodwa-ke, kufanele uqaphele ukuthi uSemalt uzokwenza ukuhlaziywa kokuqala ukuze aqonde ukuthi imiphumela ingaba ngokushesha kangakanani. Ukuhlaziywa okuningiliziwe kanye nengxoxo elandelayo ngokusekelwa kwamakhasimende wethu kungakusiza ukuba ufike ngomugqa wesikhathi olubi.
Kulokhu, i-AutoSEO ilungele izinhlobo ezilandelayo zabasebenzisi:
Osomabhizinisi abafuna ukwesekwa kwe-SEO kumabhizinisi abo amaningi online
Ama-Blogger nabalobi bafuna ukuheha ithrafikhi / ukufundwa
Abathonya kanye nosaziwayo be-inthanethi
Thatha isibonelo sikaVaibhar Chaurasia we-HealthKart owasebenzisa izinsiza zethu ze-AutoSEO ukucindezela ukuma kwewebhusayithi yakhe ku-Google India yonkana. Kungakapheli izinyanga ezimbili, sikwazile ukuthuthukisa amazinga wamagama akhe abucayi bebhizinisi. "Ngingabancoma kakhulu labo abaqalayo nezinkampani, ezihlupheka ngokweqile futhi zingabonakali kahle iwebhusayithi yazo," kusho uChaurasia oncoma uSemalt kubo bonke abasha abasaqala, amabhizinisi, namaMSME emhlabeni jikelele.
I-AutoSEO kuzoba yisinqumo esihle uma umusha emhlabeni we-SEO (noma ukumaketha kwedijithali, ngokuvamile) noma ufuna imiphumela esheshayo. Uma uyibhizinisi lokuqalisa elifuna ukuthatha inzuzo esheshayo kodwa egcwele yesimo sokuqubuka kwe-coronavirus , sincoma i-AutoSEO.
Kodwa-ke, uma izinhloso zakho zihlala isikhathi eside futhi ufuna ukwakha idumela eliqinile lebhizinisi lakho online nge-SEO, kufanele ubheke i-FullSEO, iphakheji lethu le-A-to-Z SEO.
Lezi zinsuku wonke umuntu uzibiza ngochwepheshe we-SEO. Lokho kungaba iqiniso uma ucabanga nje ukukhulisa iwebhusayithi nokubhala okuqukethwe njengendlela yokuthola imiphumela ye-organic. Eqinisweni, futhi uzokwazi lokhu, i-SEO ijule kakhulu futhi iyinkimbinkimbi kunalokho.
Ukuze ube nomkhankaso we-SEO ophumelelayo webhizinisi lakho ekutholela ukuguqulwa kwangempela (okungukuthi amakhasimende wangempela), udinga ukuya ngale kokuyisisekelo. Futhi yilapho i- FullSEO ngoSemalt ingena khona esithombeni.
Uhlobo oluthuthukisiwe lwe-AutoSEO, le phakheji likunikeza konke okudingayo emkhankasweni we-SEO. Kusuka ocwaningweni lwamagama angukhiye kuya ekubonisaneni, i-FullSEO inakho konke okudingeka ibhizinisi ukukhulisa ubukhona bayo be-inthanethi nokuqinisa ukuthengisa kwayo. Sikhuluma ngiphindaphinda ithrafikhi, ukuhola, kanye nokubanjwa okuphezulu nedumela lewebhusayithi yakho phakathi kwamatekisi.
Umdwebo 2 - Ukwesekwa kwamakhasimende kungenye yezinto ezinhle kakhulu ze-FullSEO uma kuqhathaniswa ne-AutoSEO
Nge-FullSEO, ubheke ukuthengiswa okunyukayo, inzuzo, kanye nokusebenzisana nabathengisi beqembu lesithathu. Umhlomulo owengeziwe kuwe kanye nebhizinisi lakho ezinyangeni naseminyakeni oqhuba ngayo umkhankaso we-FullSEO uzokunikeza imivuzo isikhathi eside. Njengoba wazi, ukwakha iwebhusayithi eqinile enegunya lesizinda esiphakeme namuhla kungakutholela imihlomulo yeminyaka neminyaka ezayo.
Nalu uhlu lwemisebenzi ebucayi oyothola ngaphezu kwakho konke okuhlinzekwa yi-AutoSEO:
Ukulungiswa kweWebhusayithi ngobuchwepheshe - ukwenziwa kwe-CMS, i-schema markup, ukuthuthukisa isivinini sekhasi, ama-satemaps, kanye nokumaka i-GA / GTM. Ukunikezwa ngokuphelele kwewebhusayithi yakho kuzonikezwa kanye nezixazululo ezinqenayo ezivame kakhulu kuma-SEO nezimboni zezentengiso
Okuqukethwe - Yonke imfuneko yokuqukethwe eyodwa - kusuka kubhulogi lewebhusayithi kuya kokuthunyelwe kwabezindaba kwezenhlalo kuya ekunikezelweni kwe-PR - kuzokhonjiswa, kuqanjwe, futhi kushicilelwe ukwenza ngcono inani le-SEO lewebhusayithi yakho
Ukubonisana - Uma umusha ku-SEO, uzodinga ukubonisana ngemikhuba emihle kakhulu. Iphakheji ye-FullSEO ka-Semalt izokunikeza iziphakamiso mayelana nezinketho zokuthumela okuqukethwe, amaqhinga athuthukile namasu afana namazwibela acebile, neminye imisebenzi eqinisekile yokuqinisa iwebhusayithi yakho ekhasini lokuqala leyinjini yakho yokusesha oyithandayo.
Empeleni, nge-FullSEO, uzothola isu elenzelwe ibhizinisi lakho online elibheka isithombe esikhulu. Ingabe ungumdlali omusha we-e-commerce embonini yendawo osuvele ugcwele amabhlogo amakhulu namawebhusayithi asunguliwe? I-FullSEO izokucindezela kahle ngaphezu kwabo kumasayithi aku-inthanethi.
Thatha isibonelo senkampani ye-e-commerce iZanvic, ebambe izinsiza zikaSemalt's FullSEO futhi ikwazile ukwandisa ukuthwala abantu cishe ngo-500% esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyisikhombisa. Ekupheleni kwezinyanga eziyisithupha zokuqala zomkhankaso, uSemalt wakwazi ukuletha ngaphezu kwama-150 wamagama akhe abalulekile emiphumeleni eyi-10 ephezulu ye-Google.
Kuyabonakala ukuthi i-FullSEO impela inokunqenqema ngaphezulu kwe-AutoSEO nokuthi ithatha indlela ephelele. Kepha-ke wazi kanjani ukuthi i-FullSEO ingeyakho noma cha?
Uma kuqhathaniswa, i-FullSEO inconyelwe izinkampani, izinkampani zomhlaba wonke ezixhaswe kahle, nezinkampani ezinethemba lokuphazamisa imboni yazo.
Yikuphi Okufanele Ukhethe?
Njengoba ukwazi ukuphuma ezingxenyeni ezingenhla, kuyacaca ukuthi i-AutoSEO yiphakethe le-Starter elinemisebenzi ekhawulelwe esikalini salo. Ngakho-ke, kufanelekile kubantu abathile nabasaqalayo abancane abafuna imiphumela esheshayo.
Ngakolunye uhlangothi, uSemalt uncoma i-FullSEO ezinkampanini nakumawebhusayithi e-commerce adinga ukucabanga okukhulu futhi enze okukhulu ukuze akwazi ukuphumelela ngaphambi komncintiswano omkhulu.
Ukuqhathaniswa kwe-AutoSEO ne-FullSEO: Isifinyezo Esisheshayo
Siyazi ukuthi abanye bakho bangashesha ukulungisa inkonzo ikakhulukazi ngalesi sikhathi sokuvalwa. Ngakho-ke, nansi ukufingqwa okusheshayo ngendlela kwetafula. Bheka ukuthi amaphakheji we-SEO ephelele ahluke kanjani kumingcele.
Njengamanje, kufanele ube nomqondo ofanele mayelana nokukhetha kwakho. Ngenkathi bobabili i-AutoSEO ne-FullSEO benezinzuzo zabo ezithile, kufanele ukhethe okuyiyona evumelana nezidingo zakho.
Ukuhlaziywa kokuqala kwewebhusayithi yakho, xhumana nathi namuhla . Ungaqala futhi ukunikezwa kwecala lakho le-AutoSEO ngokuchofoza lapha.